Njirimara na ịmata ihe nke ọnwa | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie anyi nile mara ihe di iche ọnwa ọnwa site na ya gafere ọnwa niile (ụbọchị iri abụọ na asatọ). Ma ọ bụ na dabere na ụbọchị ọnwa nke anyị nọ na ya, anyị nwere ike iji anya nke uche anyị satellite n'ụzọ dị iche. Ọbụghị naanị n'otu ebe ahụ ụbọchị niile, kamakwa ọ dabere na mpaghara ebe anyị nọ. N'ụzọ nke ọnwa bụ ihe ọzọ karịa mgbanwe na ụzọ ọ na-enwu mgbe a na-ele ya anya site na ụwa. Mgbanwe ndị ahụ na-agba agba gburugburu ma dabere na ọnọdụ otu ihe gbasara ụwa na Anyanwụ.
You chọrọ ịma n'ụzọ zuru ezu gini bu uzo nke ọnwa gịnịkwa mere ha ji eme? Na post a ị ga - achọta ozi niile dị mkpa 🙂
1 Mmegharị nke ọnwa
2 Ememme ọnwa
3 Ọnwa dị iche iche
3.1 Ọnwa Ọhụrụ
3.2 Ọnwa ọnwa
3.3 Ọnwa iri na ise
3.4 Waxing gibbous ọnwa
3.5 Ọnwa zuru ezu
Mmegharị nke ọnwa
Satellite anyị na-agbagharị n'onwe ya, mana ọ na-agbagharịkwa na gburugburu ụwa. More ma ọ bụ obere Ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 27,3 ịga gburugburu ụwa. Ya mere, dabere na ọnọdụ anyị hụrụ ya n'ihe banyere ụwa anyị na ọnọdụ nghazi ya banyere Sun, mgbanwe mgbanwe cyclical na-eme n'ụzọ anyị si ahụ ya. Ọ bụ ezie na e chere na ọnwa nwere ìhè nke ya, ebe ọ bụ na a pụrụ ịhụ ya dị ka otu n’ime ihe ndị na-egbuke egbuke na mbara igwe n’abalị, ìhè a abụghị ihe ọzọ karịa ngosipụta nke ìhè anyanwụ.
Ka ọnwa na-agba gburugburu, ọdịdị ya na-agbanwe site na obserwa na-ekiri ya. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịhụ naanị obere akụkụ ya, oge ndị ọzọ enwere ike ịhụ ya n'ozuzu ya, na oge ndị ọzọ ọ na-anọghị ebe ahụ. Iji mee ka o doo anya, ọnwa adịghị agbanwe agbanwe, ma ha bụ naanị nsonaazụ anya nke sitere na ngagharị nke otu na ìhè anyanwụ nke gosipụtara n'elu ya. Ndị a bụ akụkụ nke ndị na-ekiri ihe na-ekiri ụwa na-ekiri akụkụ nke mpaghara gị.
Ọ nwere ike ịbụ na na Spain anyị nwere ọnwa zuru ezu, ebe maka United States ọ na-agbago ma ọ bụ na-ebelata. Ihe niile dabere na ụwa anyị na-ele anya ọnwa site na ya.
Satịlaịtị nwere njikọ dị egwu na ụwa anyị. Nke a pụtara na ọsọ nke ntụgharị ya na-ejikọ ya na oge orbital. N'ihi nke a, ọ bụ ezie na ọnwa na-aga n'ihu na-agbanwe na ntọala ya ka ọ na-agba ụwa gburugburu, anyị na-ahụkarị otu ihu nke ọnwa. A maara usoro a dị ka ntụgharị mmekọrịta. Ma obu ya bu, n’agbanyeghi ebe anyi lere onwa anya, anyi ga ahukwa otu ihu.
Oge amị n'ọnwa na-ewe ihe dịka ụbọchị 29,5 nke enwere ike ihu uzo nile. Na njedebe nke oge ikpeazụ, a malitegharịrị usoro a. Nke a na-eme mgbe niile ma ọ dịghị akwụsị. Zọ kacha mara amara nke ọnwa bụ 4: ọnwa zuru ezu, ọnwa ọhụrụ, nkeji iri na ise gara aga na nkeji iri na ise. Ọ bụ ezie na ha bụ ndị a kacha mara amara, enwere ndị ọzọ dị n'etiti ndị dịkwa mkpa ma na-atọ ụtọ ịmara.
Onu ogugu di iche iche nke onwa n’elu igwe di iche iche dikwa iche na-eso ibe ha. Ọ na-amalite site na 0% ìhè mgbe ọnwa ọhụụ. Nke ahụ bụ, anyị enweghị ike ịdebe ihe ọ bụla na mbara igwe. Ọ dịka a ga-asị na ọnwa agwụla n’eluigwe. Dika uzo di iche iche na eme, onu ogugu nke oria na abawanye rue mgbe o ruru 100% na onwa zuru oke.
Agba nke ọ bụla n’ọnwa na-ewe ihe dịka ụbọchị asaa. Nke a putara na kwa izu nke onwa anyi ga-enwe onwa n’otu odidi. Ebe ọ bụ na ọnwa na-agba gburugburu bụ elliptical, oge a na ụdị ya dị iche iche. Ke ofụri ofụri, ndị niile n'ụzọ nke ọnwa nwere ihe ìhè ikpeazụ 7,4 ụbọchị na otu ihe ahụ ndị darker n'ụzọ.
Ọnwa dị iche iche
Tupu ịmalite ịkọwa usoro nke ọnwa, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na usoro anyị ga-akpọ aha bụ naanị ụzọ nke ịghọta ọnwa site n'ọnọdụ anyị nọ n'ụwa. N'otu oge ahụ, mmadụ abụọ na-ekiri ya n'ọkwa dị iche iche n'ụwa nwere ike ịhụ ọnwa dị iche iche. Ọ dịghị ihe dị adị site na eziokwu, onye na-ekiri ihe dị na mgbago ugwu nwere ike ịhụ ọnwa na mbido site n'aka nri gaa n'aka ekpe na n'akụkụ ndịda ọ bụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Mgbe emechara nke a, anyị na-amalite ịkọwa ụzọ dị iche iche nke ọnwa.
A makwaara ya dị ka ọnwa ọhụrụ. N'oge a, elu igwe abalị gbara ọchịchịrị ma sie ike ịchọta ọnwa n'ọchịchịrị. N'oge a, anyanwụ na-enwu n'akụkụ dị anya nke ọnwa nke anyị na-enweghị ike ịhụ. Agbanyeghị, anaghị ahụ ihu a site na ụwa n'ihi ntụgharị ọrụ mmekọrịta ahụ akpọtụrụ n'elu.
N’oge niile ọnwa na-agafe, site na nke ọhụrụ ruo n’uju, satịlaịtị na-aga ogo 180 site na mbugharị ya. N'oge a, ọ na-agba n'etiti 0 na 45 ogo. Anyị nwere ike naanị lee n'etiti 0 na 2% nke onwa mgbe ohuru.
Ọ bụ oge a ga - ahụ ọnwa mgbe ọnwa atọ ma ọ bụ abalị anọ gachara ka ọnwa ọhụụ gachara. Dabere n’ebe anyị nọ n’elu ụwa, anyị ga-ahụ ya n’otu akụkụ elu igwe ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ bụrụ na anyị nọ n'akụkụ ugwu, anyị ga-ahụ ya n'akụkụ aka nri ma ọ bụrụ na anyị nọ n'akụkụ ndịda anyị ga-ahụ ya n'akụkụ aka ekpe.
N’ime ọnwa a ka enwere ike ihu ya mgbe anyanwụ dachara, si otu a na - aga n’agbata ogo 45 na 90 nke orbit ya n’oge a. Onu ogugu nke ọnwa na njegharị a bu 3 rue 34%.
Ọnwa iri na ise
Ọ bụ mgbe ọkara nke ọnwa na-amị n'ọnwa. Enwere ike ịhụ ya site n’ehihie ruo etiti abalị. Na nke a na-eme njem n'etiti 90 na 135 ogo nke ya orbit na anyị nwere ike ịhụ ka ọ na-enwu gbaa n'etiti 35 na 65%.
Waxing gibbous ọnwa
Mpaghara ọkụ nwere ihe karịrị ọkara. Ọ na-ada tupu ọwụwa wee rute na elu mgbede ya na mbara igwe mgbe chi jiri. Akụkụ nke ọnwa a na-ahụ anya dị n'etiti 66 na 96%.
A makwaara ya dị ka ọnwa zuru ezu. Anyị nọ na mpaghara nke ọnwa na-ahụ nke ọma. Nke a na eme n'ihi na Anyanwụ na ọnwa jikọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ straightwa dị n'etiti ya.
Na nke a frasi ọ bụ na a kpam kpam abụghị ọnọdụ ka nke ọnwa ọhụrụ na 180 degrees. Enwere ike ihu ya n’etiti 97 na 100% nke ọnwa.
Mgbe ọnwa zuru ezu gasịrị, usoro ndị kwekọrọ na ya bụ:
Ingchọ ọnwa gibbous
Ikpeazụ nkeji iri na ise
Usoro ndị a niile nwere otu njirimara dị ka ọnwa, mana a na-ahụ usoro ahụ n'akụkụ nke ọzọ (dabere na mpaghara ebe anyị nọ). Ọganihu ọnwa na-agbadata ruo mgbe ọ ruru ọnwa ọhụrụ ọzọ wee malitekwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a usoro nke ọnwa apụtala nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Ọnwa N'ụzọ